आमा बन्दै नायिका प्रियंका कार्की ! - Glamour Nepal
आमा बन्दै नायिका प्रियंका कार्की !
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले चलचित्रकालागि हरेक प्रकारका भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन्, गाउँलेदेखि सहरिया अनि प्रेमिकादेखि श्रीमतीसम्म। दर्शकहरुको प्रिय बनेकी प्रियंकाले आफुलाई अब्बल कलाकारका रुपमा प्रमाणित गरिसकेकी छिन्। नव नायक आयुष्मान देशराज सँग गहिरो प्रेम सम्बन्धको चर्चा बजारमा चलिरहेको बेला उनै प्रियंका अब आमा बन्ने खबर बाहिरिएको छ।
दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा हाल छायांकनको क्रममा रहेको फिल्म ‘छक्कापन्जा–२’ मा प्रियंका आफुभन्दा केहि बर्ष कान्छी अभिनेत्री कि आमा बनेकी छिन्। एस अघिको सिक्वेल ‘छक्कापन्जा’को क्लाइमेक्समा शिवहरी पौडेलसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी प्रियंका ‘छक्कापन्जा–२’ मा आमा बनेकी हुन्।
शिवहरी र प्रियंकाको छोरीको भूमिकामा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गर्दैछिन्। सुपर हट मोडल तथा अभिनेत्रीको ट्याग भिरेकी प्रियंकाको आमा भूमिकालाई दर्शकहरुले कत्तिको रुचाउने हुन् ? प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ।
लकडाउनले गर्दा घरैमा थुुनिएका दर्शकहरू अहिले समय कटाउन अनेक क्रियाकलापमा व्यस्त छन्। पुरानो फोटोमा...
अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी चाँडै वैवाहिक जीवनमा बाँधिदै छन्। यि दुईले केहि...
दीपकराज गीरीले छोयो कि बिहे !
अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने अभिनेत्रीहरूको जीवनमा रमाइलो परिवर्तन आएको...
नायिका माथी यौन हिंसा! कम्प्रोमाइज नगरी चलचित्र नै नबन्ने प्रियंका कार्कीको खुलासा
नायिका माथी यसरी हुन्छ यौन हिंसा ! कम्प्रोमाइज नगरी चलचित्र नै नबन्ने प्रियंका कार्कीको भनाई । नायिका माथी...
स्विमिङ पूलमा एक्साईटेड स्वस्तिमा!
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई फागुन लागेपछि उत्साह थपिएको छ। विकिनीमा आकर्षक देखिएकी स्वस्तिमामाले स्विमिङ पूल मा सुतिरहेको पुरानो तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले गर्मीका लागि उत्साहित भएको लेखेकी छिन्।
चलचित्रमा अभिनय पछि पारिश्रमिक नपाएको पीडा!
चलचित्रमा अभिनय गरेपछि पारिश्रमिक नपाउने कलाकारहरुले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। आगामी दिनमा थप अभिनेता–अभिनेत्रीले आफ्नो पीडा सार्वजिनक गर्ने सम्भावना बढेको छ।
राम्री देखिनकालागी एयर होस्टेसको यस्तो कठिन तालिम!
गर्भवती हुनुहुन्छ भने कफी पिउन छोड्नुस, बच्चालाई...